Chelsea oo si lama filaan ah ugu soo dhaqaaqeysa Joe Hart haddii uu Thibaut Courtois ka aado…. – Gool FM
Chelsea oo si lama filaan ah ugu soo dhaqaaqeysa Joe Hart haddii uu Thibaut Courtois ka aado….
(London) 25 Dis 2016. Chelsea ayaa bartilmaameedkeed koowaad ka dhiganeysa goolhayaha reer England ee Joe Hart haddii ay Real Madrid sanadka soo socda ka wadato goolhayahooda Thibaut Courtois.
Goolhayaha reer Belgium ayaa waxaa indhaha ku haya tababare Zidane kaddib markii ganaaxa suuqa laga qafiifiyay kooxdiisa, taa oo la micno ah inay ciyaartooy la wareegi karaan marka uu dhammaado kal ciyaareedkan.
Courtois, 24-jir, ayaa saddex sano ku qaatay magaalada Madrid gaar ahaan Atletico Madrid ka hor inta uusan dib ugu soo laaban Stamford Bridge si uu booska uga dhaxlo Petr Cech.
Zidane ayaa ku kalsoon inuu heli doono goolhayahan iyadoo ay jirto in xaqiiqdii uu milkiilaha Chelsea Roman Abramovich uu taageero wayn u ahaa goolyaha da’da yar isla markaana diidan yahay inuu iska iibiyo.
Laakiin tababare Antonio Conte iyo shaqaalihiisa ayaa halka sare ka soo galiyay goolhaye Joe Hart goolhayayaasha ay aamisan yihiin inay u buuxin karaan booska Thibaut Courtois, haddii uu kooxda ka tago xagaaga soo socda.
Goolhayaha reer England ayaa iminka heshiis amaah ah ku jooga naadiga Torino ee ka ciyaarta horyaalka Serie A kaddib markii uu kooxda ka soo diray Pep Guardiola.
Crouch "Mar baan hadda ka hor si fool ka fool ah ula kulmay Ronaldo de Lima, nasiib darro imaba uusan garanayn ruuxaan ahay!"